Smelted slag Usoro equipments maka Metallurgy slag ...
Nyefee ladle na-agbaze Onodi Matte ladle
Nyefee ladle na-agbaze Onodi Nkedo ladle
Aluminum Electrolyzer Ghaaranụ akpụzi, Ghaaranụ Pan
Chucks na ma ọ bụ na-enweghị Hydro-cylinder
Nyefee ladle na-agbaze Onodi Ife ladle h ...
Ọla kọpa foil ike igwe nzukọ akara
The naanị anọ na-ala spinning Rolling igwe na ndị ụlọ ọrụ: The kacha spinning n'obosara bụ 3.8 mita na ogologo bụ 1.7 mita. Nke a na ụdị Rolling igwe nwere ike furtherly ebuli udi, elu ma nkenke nke cathode mpịakọta.
The akara technology nke adịghị ọcha ọdịnaya nke ingots: Site echesinụ ma kpọmkwem akara nke adịghị ọcha ọcha, kpọmkwem akara ingots mejupụtara nwere ike ọfiọk site agụụ agbaze usoro, na elu-edu titanium ingot na ala adịghị ọcha ọcha nwere ike inweta site na siri oke akara nke akụrụngwa nke ogbo titanium na n'oké mmejuputa usoro.
The akara technology nke anụ ahụ Ime Otu: Site na ibe ya bụrụ, inyefe na-ekpo ọkụ ọgwụgwọ usoro, billet oji a full ukpụhọde, na ịkwado ezi-na-grained anụ ahụ ntọala. Electrode ọnọdụ drum ezere guzobe "ahụrụ tụrụ" n'elu.
The akara technology nke Rolling anụ ahụ Ime Otu: Site na nnukwu-tonnage, abụọ na-ụzọ kọmputa space Control inyefe na nkume igwe nri na-etolite mgbanaka akụkụ, na site na oke njikarịcha (inyefe okpomọkụ na deformation) na ezi uche nkesa nhazi olu iji hụ na mmetụta nke anụ ahụ ukpụhọde na-anọgidesi nke akụkụ dị iche iche. The ikpeazụ akara ebumnobi na nkezi ọka size nke okokụre mgbanaka akụkụ esịmde GB / T6394-2002 grade5 ~ 6, na ultrasonic ule ezukọ na GB / T5193-2007 AA larịị.
The akara technology nke atụ ogho-kpụrụ anụ ahụ anọgidesi: Site mụ etozu atụ ogho-kpụrụ usoro, na iji nnukwu-dayameta mkpa-mgbidi isothermal atụ ogho-kpụrụ technology, na metal anụ ahụ ike recrystallization n'oge machining usoro nwere ike ọfiọk site ebu na billet mkpuchi technology na njikarịcha nke akara Rolling ugboro deformation. The anụ ahụ Ime Otu na-anọgidesi nke titanium electrode ọnọdụ drum bụ isi ihe maka anụ nkwadebe nke elu mma ọla kọpa foil.
Previous: eriri Sheave
Next: Titanium ngwaahịa Ijikọ Rod maka Air Nka moto